၂၀၁၁ခုနှစ်ကတည်းက ထွက်ပြေးခဲ့ရသည့် ကချင်စစ်ရှောင် တစ်သိန်းကျော်အနက် အိမ်ထောင်စု ၁၇စု ပထမဆုံးအကြိမ် တရားဝင်နေရပ်ပြန် – Myanmar Peace Monitor
၂၀၁၁ခုနှစ်ကတည်းက ထွက်ပြေးခဲ့ရသည့် ကချင်စစ်ရှောင် တစ်သိန်းကျော်အနက် အိမ်ထောင်စု ၁၇စု ပထမဆုံးအကြိမ် တရားဝင်နေရပ်ပြန်
အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက် ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် ခိုလှုံနေသော ပထမဆုံး ဝိုင်းမော်မြို့နယ် နန့်ဆမ်ယန် (Nam San Yang) ကျေးရွာ စစ်ရှောင် မိသားစု ၁၇ စု သည် ယနေ့ ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ တွင် နေရပ်ပြန်သွားကြ ပြီဖြစ်သည်။
မြန်မာအစိုးရ၏ စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့ အတည်ပြုသော မြေလွတ်၊ မြေလပ်၊ မြေရိုင်း ဥပဒေ အရ တိုက်ပွဲကြောင့် စွန့်ပစ်ထားသော ၎င်းတို့ မြေယာခြံများ အစိုးရ သိမ်းယူမည်ကို စိုးရိမ်သောကြောင့် မြစ်ကြီးနား နှင့် ဝိုင်းမော် ရှိ Nam San Yang စစ်ရှောင် မိသားစုများ နေရပ်ပြန်သွားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဦးဆောင်သူ Slg. Brang Li ယခုလို ပြောပါသည်။
“ရွာကိုပြစ်ထားတာလည်းကြာပြီ။ အခုဆိုရင် စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေက မြေယာဥပဒေ အသစ်နဲ့ လယ်ယာမြေများ ဆုံးရှုံးမှာကြောက်နေကြပြီ။ အစိုးရက အသစ်ထုတ်ပြန်ထားသော လယ်ယာမြေ ဥပဒေကြောင့် သူတို့ လယ်ယာမြေများကို မတရားသိမ်းယူမှာ စိုးရိမ်နေကြတယ်။ နန်ဆမ်ယန်ဆို ပိုဆိုးတယ်။ အားလုံးနဲ့ ဆက်သွယ်နေတဲ့ လမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိနေတော့ အစစအရာရာ စိုးရိမ်ရတယ်။ အဲ့ကြောင့် ရွာကို တရားဝင် အိမ်ထောင်မိသားစု ၁၇ စုက ပြန်ပြီဖြစ်တယ်။”
တိုက်ပွဲကြောင့် ဒေသခံပြည်သူများ စွန့်ခွာထားသော Nam San Yang ကျေးရွာကို ပြန်လည်ထူထောင် ရန်အတွက် နိုဝင်ဘာ ၁၁ရက်နေ့တွင် သက်ဆိုင်ရာ ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရ တာဝန်ရှိသူများ အသီးသီးသို့ စာတင်ပြ တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်းကို လူမှုကူညီရေးလှုပ်ရှားသူ ကချင်အနုပညာရှင်ကြီး Slg. Hpaula Gam Hpang က ယခုလို ရှင်းပြသည်။
“ကျနော်တို့က နန့်ဆမ်ယန် စစ်ရှောင်ပြည်သူများ နေရပ်ပြန်နိုင်ရန်အတွက် အစိုးရကို စာတင်ပြခဲ့တယ်။ နိုဝင်ဘာ ၁၄ရက်မှာ ကျနော့်ကို ခေါ်ဆွေးနွေးတယ်။ အခြေအနေအဖြစ်မှန်ကို ပြောပြတော့ ခွင့်ပြုချက်ရခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် နယ်လုံဝန်ကြီးက သူတို့ဘက်က စည်းကမ်းချက်တွေ ပြန်လည် ထုတ်ပေးမယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။”
ကချင်ပြည်နယ် လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး သစ် ဗိုလ်မှူးကြီး နေလင်းထွန်း က မိသားစု ၁၇စု နေရပ်ပြန်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သော လုံခြုံရေးပိုင်းနှင့် အစားအသောက်များ ကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟု ကတိပြုထားကြောင်း သူက ဆက်ဆိုသည်။
ယခု Nam San Yang စစ်ရှောင် မိသားစု ၁၇စု မှ လူ ၅၇ဦး ကိုသာ ပထမအကြိမ် ပြန်ခိုင်းမည်ဖြစ်သဖြင့် အများစု ကျန်ရှိနေသေးသော စစ်ရှောင်များကိုလည်း စာရင်း အတိကျကောက်ယူပြီး အမြန်ဆုံး နေရပ်ပြန်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုသိရသည်။
မြစ်ကြီးနာ-ဗန်းမော်လမ်းမပေါ် ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO လိုင်ဇာမြို့ ဝင်ပေါက်၌ရှိသော အိမ်ခြေ ၂၀၀၀ ခန့်ရှိ Nam San Yang ကျေးရွာကို ၂၀၁၁ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့ အစိုးရတပ် နှင့် KIO တကျော့ပြန် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားလာပြီးနောက် ရွာထဲတိုက်ပွဲကြောင့် စွန့်ပစ်ထားရခြင်းဖြစ်သည်။
ကချင်ဒေသတွင် မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် ကချင်ဒေသတွင် မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် ကချင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့(KIA/KIO)တို့အကြား ၂၀၁၁ခုနှစ် အတွင်း တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ကချင်စစ်ရှောင်ဒုက္ခသည် တစ်သိန်းခြောက်ထောင်ရှိနေကြောင်း UNOCHA က ယခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလဆန်းပိုင်းက ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။
Tagged on: KNG
Staff December 20, 2018 News No Comments
← ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ကျရာအခန်းကဏ္ဍတွင် တာဝန်ကျေကြရန် အရပ်ဖက်အဖွဲ့များကို ဝန်ကြီးချုပ် တိုက်တွန်း
Peace related headlines →
Peace related headlines
ကေအဲန်ယူ နှင့် NRPC တပ်မတော် အလွတ်သဘော ဆွေးနွေးမည်
Paul Gregory on 2018 Dashboard
Carlos Kamaunu on Conflict-Linked drug trade threatens Myanmar Peace
Archives Select Month April 2019 March 2019 February 2019 January 2019 December 2018 November 2018 October 2018 September 2018 August 2018 July 2018 June 2018 June 2017 June 2016 June 2015 June 2014 July 2013 June 2013
Copyright © 2019 Myanmar Peace Monitor. Powered by WordPress. Theme: Spacious by ThemeGrill.